Inflatable Jacuzzi - you ma nnukwu elele ya niile? | Bezzia
Inwe jacuzzi na-enye ọkụ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka ụlọ anyị na n'ezie, maka ogige anyị. Ọ bụrụ na anyị nwere mpaghara n'akụkụ abụọ ahụ, oge eruola ka anyị chee echiche banyere otu esi achọ ya mma na ụzọ ka mma karịa ime ya n'echiche nke anyị ga-agwa gị taa na ị ga-ahụ ya n'anya.
Maka inwe jacuzzi bụ nnukwu nrọ nke ọtụtụ. Mana obụghị naanị ikwu na anyị nwere ya, kama n'ihi na ọ nwere nnukwu elele dị ukwuu nke anyị ga-eburu n'uche. Naanị n'ụzọ a, ị ga-ekpochapụ obi abụọ ma ị ga-azụ ya ma ọ bụ na ọ bụghị, mana anyị agwalarị gị na mkpebi ahụ ga-abụ nke kacha dị mma maka gị na ezinụlọ gị dum. Chọpụta!
1 Kwuo maka nrụgide maka ekele maka jacuzzi
2 Will ga-ewepụ ahụ mgbu
3 You nwere ike ikpokọta ma ọ bụ gbasasịa ya mgbe ọ bụla ịchọrọ
4 Ọdịdị nke anụ ahụ ga-aka mma
5 Ọgwụ pụrụ iche maka ọrịa ogbu na nkwonkwo
Kwuo maka nrụgide maka ekele maka jacuzzi
Ma Jacuzzi ma spa, bụ ụdị ọdọ mmiri nwere afụ na-agwọ ọrịa. Otu kachasị bụrụ uru ha bara bụ na ọ nwere ike belata nrụgide gị. N'ezie, ọ dịghị ụbọchị ị ga-ezu ike zuru oke. Nke a na-eme ka ahụ mmadụ na-arụ ọrụ mgbe niile n'ihi ọrụ, ụlọ na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ. Yabụ, ịsa ahụ n'etiti egosipụta ga-eme ka akụkụ ndị ahụ niile edekọtara izu ike, ị ga-ahụkwa nnukwu enyemaka nke na-abịa site na ịhapụ nnukwu esemokwu n'azụ. You nwalela ya?
Will ga-ewepụ ahụ mgbu
Tupu anyị kwuru nrụgide na ugbu a ihe metụtara ụfọdụ. N'ihi na ihe mgbu nwekwara ike ịbụ usoro nsogbu agbakwunyere. Karịsịa ma ọ bụrụ na ha bụ ahụ ike, ị ga-enweta ahụ ike site na jacuzzi na-agbanye ọkụ. Ebe ọ bụ na maka nke a, ọ ga - abụ ụgbọelu ọ bụla ga - esi na ya pụta onye ga - enwe ọkwa niile. Chọpụta na site rụọ ọrụ mgbasa, ọ ga-izuike ebe na-afụ ụfụ obere na-erughị ka anyị chere. Nke a bụ akụkụ nke nchikota nke mmiri ọkụ na jets na-arụ ọrụ. Yabụ naanị ịbụ nkeji ole na ole kwa ụbọchị, anyị ga-achọpụta ngwa ngwa nhụsianya nke ihe mgbu ndị a.
You nwere ike ikpokọta ma ọ bụ gbasasịa ya mgbe ọ bụla ịchọrọ
Ọ bụ ihe dị mma n'ihe niile enwere ike ịgbakọta ma gbasasịa, yabụ na nke a, anaghị ahapụ ya n'azụ. Ikekwe n'oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge ọkọchị, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iche echiche maka ịkwanye ya n'èzí, ke ini etuep, ị nwere ike ebukọta ya ruo oge ọzọ. Site na ihe anyị nwere ike ikwu na ọ bụ ihe bara uru ma na-eme ka ọ nwee ọtụtụ ntụgharị, dịka anyị siri masị ya. N'ihi ya, ọ bụ ihe ọzọ dị mma iji tulee.
Ọdịdị nke anụ ahụ ga-aka mma
N'ihi na ọ bụghị uru niile ga-elekwasị anya na ime anyị, mana enwere ike ịhụ ha na mpụga. Nke a pụtara na ọ bụ akpụkpọ nwere ọtụtụ ihe ikwu. N'otu aka ahụ ọ ga-adịkwu hydrated. Nke ga - eme ka ọ dị mma na wrinkle n’otu oge. Yabụ, n'ezie ị gaghị enwe ike iguzogide ịzụrụ jacuzzi na-enweghị ike ịmara na ọ bụghị naanị ahụike gị ga-akawanye mma, mana na a ga-ahụ ihe a niile site na mpụga.
Ọgwụ pụrụ iche maka ọrịa ogbu na nkwonkwo
Eziokwu bụ na ụfọdụ ọrịa dịka ụdị ọkpụkpụHa enweghị ọgwụgwọ kachasị mma. Nke ahụ bụ, anyị na ha ga-ebi ruo ogologo oge. Mana ị ga-ahọrọ ụfọdụ nhọrọ dị mfe iji nwee ike belata ha. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji ekwu banyere Jacuzzi. Ngwakọta mmiri na okpomọkụ iji kwalite ụfọdụ nsogbu ahụike, dị ka anyị na-ahụ. Ọ bụ eziokwu na ọrịa ndị na-adịghị ala ala ga-anọgide na-enwe mmeri mana n'ezie n'ihi usoro a, anyị ga-emezi ma hụ mgbanwe dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Inflatable Jacuzzi: you ma nnukwu elele dị na ya